Wararka - Hengxing wuxuu kaqeybqaatay bandhigii qurxinta quruxda badnaa ee CHINA 53-aad
Carwadu waa carwada ugu quruxda badan ee lagu soo bandhigo dalka Shiinaha, ururinta mashiinno, qalab wax lagu duubo, alaabooyin daryeel shaqsiyeed, Wax soo saarka quruxda xirfadeed, qurxinta, Daryeelka Caafimaadka iyo wixii la mid ah.
Mashiinnada 'Hengxing' ayaa si taxaddar leh loo diyaariyey, oo leh heer teknolojiyad heer sare ah, waxqabad sare leh; taxanaha qalabka qufulka tuubbada ee ultrasonic ayaa mar kale noqda mid muhiim u ah bandhiga. Naqshadeynta xariifnimada iyo natiijada qufulka quruxda badan ee walxaha kala duwan, ayaa soo jiidatay ganacsato badan oo gudaha iyo dibaddaba isugu yimid si ay u daawadaan una tashadaan si looga wada hadlo. Dad badan oo Iibsadayaashu waxay keeneen dhibaatooyinka farsamo ee soo wajahay ka shaqeynta goobta, ka dib markii ay murugeeyeen 10 sano khibrad injineero hagitaan farsamo iyo habeyn farsameyn, tiro ka mid ah qanacsanaanta macaamiisha weyn, goobta ayaa gaartay ujeedooyin iibsi.
Waa dalxiis goosasho ah. Bandhigga, ayaa la iibiyey dhammaan qalabka lagu soo bandhigo mashiinnada hengxing, Tusaale ahaan macaamiishayada Vietnam ayaa dalbaneysa hal mashiinka wax lagu xiro tuubada tuubbada ee ultrasonic, sidoo kale waxaan dib ula soo laabannay talooyin badan oo ka yimid isticmaaleyaasha ugu dambeeya iyo kuwa wax iibiya.
Qalabka Mashiinka 'Henxging Makiinado' ee tuubbada tuubbada tuubbada tuubbada tuubbada leh ee 'ultrasonic tube' waxay samaysay horumar muddo dheer ah iyo guul sannadihii la soo dhaafay; waxaa jira dhaxal sumad gaar ah, horumarinta codka. Iyada oo leh karti wanaagsan oo xirfad suuq ah, Xitaa waxaan ku leenahay aagga qalabka wax lagu xiro ee ultrasonic wuxuu ku fadhiyaa boos muhiim ah. laakiin sidoo kale waan ognahay taas ”waddo dheer ayaa loo baahan yahay in la maro. Waxaan sidoo kale sii wadi doonnaa inaan sare u qaadno nidaamka maareynta, si aan u dardar galino howlaha sumadeynta mashiinka Hengxing, waji macquul ah u leh baahida suuqa, sameynta mashiin tayo sare leh iyo adeeg macaamiisha iyo asxaabta.